SARCOIDOSIS နှင့်ပူးတွဲ, ကြွက်သား, အရိုး
Sarcoidosis အဆစ်, ကြွက်သားများနှင့်အရိုးတို့သအပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ sarcoidosis နှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 မှ5အတွင်းလူနာသည်ဤ musculoskeletal ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်။ ဒါဟာရောဂါလက္ခဏာတွေ, စမ်းသပ်မှုများနှင့်အဆစ်, ကြွက်သားများနှင့်အရိုးတို့သထိခိုက် sarcoidosis များအတွက်ကုသမှုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များပါဝင်သည်။
Sarcoidosis နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အရိုးတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုတိုက်ရိုက်အရိုးထဲမှာရောင်ရမ်းခြင်းမှတဆင့်ခြင်းနှင့်သွယ်ဝိုက် sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာမှသက်သာရာရစေရန်ယူကုသမှတဆင့်။
ရောဂါလက္ခဏာများ အရိုးအတွက် sarcoidosis နှင့်အတူလူအများစုဟာရောဂါလက္ခဏာကိုခံစားကြပါဘူး။ အခြေအနေကိုကြောင့်အရိုးထဲမှာမဆိုစသောအပြောင်းအလဲအစားပုံရိပ် Scan ဖတ်ပေါ်တက်ခူးနေကြသည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်မကြာခဏပိုပြီးစမ်းသပ်မှုလုပ်လိုပါလိမ့်မယ် - ဤအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအခြားအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါသူတို့ sarcoidosis ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလျှင်ထွက်ရှာရန်အရေးကြီးပါသည်။
သင်တို့အရိုးထိခိုက်လျှင်သူတို့ကသင်သည်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေကြသည်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်လျှင်, sarcoidosis အဘို့သင့်ကုသမှုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်သောမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ပူးတွဲသို့မဟုတ်ကြွက်သားရောဂါကုသမှုဆင်တူကိုယ်ခံစွမ်းအားဆေးဝါးအကြံပြုလိမ့်မည်။
ကုသမှုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ sarcoidosis နှင့်အတူလူနာမကြာခဏ corticosteroid (prednisolone) ကုထုံးနဲ့ကုသကြပါတယ်။ ဤသည်တို့အရိုး (အရိုးပွရောဂါ) ၏ပျော့စေနိုင်ပါတယ်။ ထူးအိမ်သင်သွေ့ခြောက်သောအရိုးရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်, ကြေကွဲဖို့ပိုပျက်စီးလွယ်ခြင်းနှင့်ကျရောက်နေတဲ့အားနည်းအရိုးတို့ကိုစွန့်ခွာမလုပ်ကြပါဘူး။
Sarcoidosis နှင့်ပူးတွဲ, ကြွက်သားများနှင့်အရိုး:
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ရေရှည် Steroid တစ်မျိုးကုထုံးအပေါ်လူနာတစ်ဦးအရိုးသိပ်သည်းဆစကင် ( 'DEXA' 'စကင်) ကို အသုံးပြု. အရိုးပွရောဂါများအတွက်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အရိုးတို့သဖြစ်ကြပြီးကုသမှုလမ်းပြဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာအားကောင်းတဲ့တိုင်းတာသည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်လည်းကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤအမှု၏အဆင့်ဆင့် sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသွေ့ခြောက်သောအရိုးများအတွက်အရေးကြီးပါသည်နိုင်ပါသည်။
ကုသမှု အရိုးအားကောင်းလာစေရန်နှင့်အရိုးကျိုးတားဆီးကိုကူညီကုသတဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ အမြားဆုံးသတ်မှတ်ထားသည့်မူးယစ်ဆေးအပတ်စဉ် Alendronic အက်ဆစ်တစ်ချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကယ်လစီယမ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဗီတာမင် D ကိုဖြည့်စွက်နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
sarcoidosis နှင့်အတူလူမြင့်မားသောကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုရှိခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့နိုင်ပါတယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့သင့်ရဲ့ကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုအဆင့်ဆင့်မဆိုဖြည့်စွက်ယူမီတိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးသည်။ ဤအဆင့်ထို့နောက်မှန်မှန်အသွေးအားစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အကွံဉာဏျများအတွက် SarcoidosisUK က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရည်ညွှန်း။
အလုံအလောက်ကယ်လစီယမ် (နို့ထွက်ပစ္စည်းများ, အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ) စားသုံး
အလုံအလောက်ဗီတာမင် D ကို (နေရောင်ခြည်) ရတဲ့
နာတာရှည်အဆစ်နာကျင်မှု sarcoidosis နှင့်အတူအားလုံးလူနာထက်နည်း 1% သာသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာသင်ကုသမှုသို့မဟုတ် physiotherapy ပြောင်းလဲမှုများမှအကြိုးခံစားစေခြင်းငှါအဖြစ်သင့်ဆရာဝန်သင့်ရဲ့ပူးတွဲလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုသိတယ်အရေးကြီးပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာများ မဆိုပူးတွဲ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ရနိုင်ပေမယ့်ထိခိုက်မှုကိုအဓိကအဆစ်ခြေဖမျက်သို့မှီနှင့်ဒူး ထောက်. ဖြစ်ကြသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများလေ့ပါဝင်သည်:
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပူးတွဲနာကျင်မှုသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်မှတဆင့်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အဆစ်သို့မဟုတ်အခြားပုံရိပ် Scan ဖတ် (ultrasound သို့မဟုတ် MRI) ၏ X-ray ပါဝင်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးဆေးထိုးအပ်နှင့်ပြွတ် (ခန္) ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ရောင်ရမ်းပူးတွဲကနေအရည်တစ်နမူနာယူနိုငျသညျ။
ကုသမှု သင့်ရဲ့အဆစ်များတွင်ရောဂါလက္ခဏာကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုကုသတဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (NSAIDs), corticosteroids (prednisolone) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Methotrexate ကဲ့သို့သောအခြားခုခံအားဆေးဝါးများပါဝင်နိုင်သည်။
အကြံ ရောင်အဆစ်နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေသော်လည်းရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအဆစ်တစ်ဝိုက်ခံစားခဲ့ရတောင့်တင်းမှုကိုလျှော့ချကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လေ့ကျင့်ခန်း၏ရလဒ်အဖြစ်ပြင်းထန်ပူးတွဲနာကျင်မှုမှအလယ်အလတ်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ချက်ချင်းရပ်တန့်နှင့်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
'' Lӧfgrenရဲ့ Syndrome ''
တချို့ကလူနာအများဆုံးမကြာခဏခြေဆစ်မှာ, အဆစ်များတွင်ရုတ်တရက်စတင်ခြင်းနာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ Shin မှာနာကျင်အနီရောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းရောင်လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအသားအရေအပြောင်းအလဲများကို '' erythema nodosum '' ဟုခေါ်ကြသည်။ ဤအလက္ခဏာတွေအတူတကွဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ, သင့်ဆရာဝန်ရင်ဘတ်အတွက်ကျယ်ဝန်းတုံးမှာတက်စေ့ဂလင်းရှာတဲ့ရင်ဘတ်က X-Ray စီစဉ်ပေမည်။
ဤရွေ့ကားတုံးမှာတက်စေ့ဂလင်းပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ X-Ray ပေါ်ဤအကြောင်းပူးတွဲလက္ခဏာတွေပေါင်းစပ်, ရင်ဘတ်ထဲတွင်အရေခွံအပြောင်းအလဲများကို (erythema nodosum) နှင့်ကျယ်ဝန်းတုံးမှာတက်စေ့ဂလင်း '' Lӧfgrenရဲ့ syndrome ရောဂါ '' ဟုခေါ်သည်။ ဤသည်အများဆုံးမကြာခဏအပူချိန်အပြောင်းအလဲများအဖြစ်နွေဦးပေါက်နဲ့ဆောင်းဦးရာသီများတွင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရာသီအလိုက်ခွအေနအေဖြစ်ပါတယ်။
ကုသမှု။ '' Lӧfgrenရဲ့ Syndrome '' မကြာခဏတိကျတဲ့ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ, သူ့ဟာသူဖြေရှင်း။ တခါတရံမှာ Non-တီးရွိုက် Anti-inflammatory (NSAIDs) မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ် corticosteroids (prednisolone) သင့်လက္ခဏာတွေလျော့ပါးကိုကူညီမယ့်ရေတိုကာလအတွက်ပေးအပ်ထားတယ်။
sarcoidosis အတွက်ကြွက်သားပါဝင်ပတ်သက်မှုအတော်လေးဆန်းပါပဲ။ အချို့လူများကနာကျင်ဖြစ်နိုင်သည့်၎င်းတို့၏ကြွက်သားအတွက်ဖုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သည်အခြားကိစ္စများတွင်ကြွက်သားပါဝင်ပတ်သက်မှုလျော့နည်းတိကျတဲ့နှင့်ကြွက်သားယေဘုယျအားဖြင့်အားနည်းခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဤအလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးလျှင်ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောပြရန်အရေးကြီးသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဒါကကြွက်သား (MRI scan သို့မဟုတ် CT ပေစကင်), ကြွက်သားများလျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြွက်သားနမူနာ (ခန္) ယူပြီး၏ Scan ဖတ်များပါဝင်သည်ပေလိမ့်မည်။ ကြွက်သားခန္ဖျော်ဖြေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒေသခံထုံဆေးအောက်မှာပြုနိုင်ပါသည်။
ကုသမှု ကြွက်သား sarcoidosis အတွက်ထိခိုက်သောအခါ, ကုသမှုသည်အခြားခုခံအားဆေးဝါးများ (ဥပမာ Azathioprine သို့မဟုတ် Methotrexate) အပြင်များသောအားဖြင့် corticosteroids (prednisolone) ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။